2013-05-12 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
IN Optimizer - ON Saturday, May 18, 2013 No comments
နိုင်တဲ့ Optimizer Software ကောင်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Version အသစ်မှာ ပိုမိုလှပတဲ့ ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်နဲ့ အသုံးဝင် Tools အချို့ ပါဝင်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး Theme ဒီဇိုင်းမှာလည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံလေးတွေထည့်သွင်းလို့ရတာက လည်း ဆန်းသစ် တာကြောင့်ကျေနပ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ portable လေးတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Install လုပ်စရာမလိုတဲ့အတွက်စက်မလေးစေဘဲအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်ရင်တော့အောက်မှာယူ
Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) dropbox
IN Photoshop, Portable - ON Saturday, May 18, 2013 No comments
photoshop သမားတွေနဲ့photoshop ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ပါAdobe PhotoShop Cs6 Extended portable လေးတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်Installလုပ်စရာမလိုတဲ့အတွက်စက်မလေးစေ ဘဲအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်potable ဆိုတော့ ဘယ်သွားသွား stick လေးထဲထည့်ပီး ယူသွားလို့ ရတာပေ့ါဗျာ....လိုချင်ရင်အောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ်.....
Download>>>uploadingit (or) solidfiles (or) zippyshare
Cyberlink PowerDirector Ultra 11.0.0.2812 Full with Serial key
IN Video Editing - ON Saturday, May 18, 2013 No comments
ဒါကတော့ Video Editing ကို Professional ကျကျ လုပ်ဆောင်ချင်သူများအတွက် တကယ်ကို ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တောင်းဆိုထားတာ ရှိလို့လည်းတင်ပေးဖြစ်တာပါ။ တင်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်တိုင်တင်ထားတာမဟုတ်ပဲ အဆင် ပြေမယ့်လင့်ကို ညွှန်းပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ IDM နဲ့ဒေါင်းလို့ရသလို Resume လည်းရတာကြောင့် အဆင်ပြေပြေနားနားနေနေ ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးအထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ Effect တွေလည်းအစုံအလင်ပါဝင်လို့ ဘာမှ ထပ်ဒေါင်းစရာမလိုအောင် တခါတည်း စုစည်းထားတာကြောင့် ဖိုင်ဆိုဒ်က 1.01 GB အထိရှိပါတယ်။ လိုင်းကောင်းပြီး တကယ်အသုံး လိုအပ်သူများဒေါင်းယူလိုက်ကြပါ။ ဒါမှမဟုတ် မူရင်းဖိုင်ရှိပြီး လို့ Activate မဖြစ်သေး သူများ ကတော့ Key တွေပဲဒေါင်းချင်ဒေါင်းလိုက်ကြပါဗျာ...
Download >>>>> PowerDirector Ultra 11.0.0.2812 (1.01GB)
Download Serial Key >>>>> FileSwap (or) UppIt
Credit to .............ko yan
IN Photoshop - ON Saturday, May 18, 2013 No comments
ဓါတ်ပုံထဲကမိမိတို့မျက်နှာတွေကိုအချောမွေ့ဆုံး ပြင်ဆင်ချင်သူတွေအတွက်တော့ ဒီကောင်လေးအကောင်းဆုံးကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Photoshop ကျွမ်းကျင်စရာမလိုသလို အလင်းအမှောင်လည်းသိပ်သိထားစရာမလိုပါဘူး..သူထဲမှာပါဝင်တဲ့Toolsလေးတွေကမျှော်လင့် ထားတာထက် များစွာစွမ်းဆောင်နိုင်တာတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ချည်းသက်သက်အသုံးပြုလို့ ရသလို Photoshop Plug-in အဖြစ်ပါအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..။ လိုအပ်သူတွေပါအောက်မှာယူသွားလိုက်ပါဗျာ..။
Tusfiles Or UppIt
မှတ်ချက်.။ ။ TusFiles ကနေဒေါင်းလုပ်ဆွဲတဲ့အခါ "download with TusFiles accelerator and get recommended offers" မှာ အမှတ်ခြစ်လေးဖြုတ်ပြီးမှဒေါင်းကြပါ။
IN Photo Editing - ON Saturday, May 18, 2013 No comments
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပုံတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပြင်ချင်တဲ့သူတွေအကြိုက်တွေ့ မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပါ..Full Versionတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရအောင် Crack နဲ့ ဖူးလုပ်အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပြီး အသုံးမပြုတတ်သေးတဲ့ သူများအတွက်Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို Crack ဖိုင်လေး copy-paste နဲ့ ထည့် ရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ..
Download>>>dropbox (or) solidfiles (or) zippyshare
ဒါကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အပျော်တမ်း video editing သမားများ အတွက် video editing software ပါ။ ဖုန်းနှင့်ရိုက်ထားတာဖြစ်ဖြစ် camera နဲ့ အပျော်တမ်း ရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် တည်းဖြတ်လို့ ရပါတယ်။ 80 MB ကျော်ကျော် လေးပဲ ရှိပါတယ်။ video editing စပြီး လေ့ကျင့်ချင်တဲ့သူ စမ်းချင်တဲ့သူများအတွက် ဒီကောင်လေးက အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး video တည်းဖြတ်ကြည့်လို ရပါတယ်။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ အောက်မှာ Download လုပ်ယူ လိုက်ပါ။
Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) zippyshare
IN Software - ON Saturday, May 18, 2013 No comments
ကျွန်တော်တို့ Windows သုံးတဲ့သူတွေ မလိုအပ်တဲ့ဖိုင် တစ်ခုခုကို ဖျက်တဲ့အခါ locked ဖြစ်နေလို့ ဖျက်လို့မရဘူးဆိုပြီး error message တက်လာတာကြုံဖူးကြမှာပါ.. ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့မရဘာမရနဲ့လေ.. အဲဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ Unlocker ကို သုံးပါတယ်.. သူ့အလိုလို Unlock လုပ်ပေးသလို . ဖျက်မရတဲ့ ဖိုင်ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Unlock ဆိုပြီး Lock ကို ဖြုတ်ပစ်လို့လည်းရပါတယ်... Free Version ဖြစ်ပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည် မညံ့ပါဘူး. သုံးကြည့်ပါ..
Download>>>dropbox(or) solidfiles (or) zippyshare
Unlocker is an explorer extension that allows you withasimple right-click of the mouse onafile or folder to get rid of error messages such as error deleting file or folder and cannot delete folder: it is in use by another program or user.
- ON Saturday, May 18, 2013 No comments
ပုံတွေကိုမိမိနှစ်သက်ရာသီချင်း နှစ်သက်ရာစာသားပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ SlideShow Movie
ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်.. 2D နှင့်3D transition effects ပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီး ထုတ်ပေးမယ့်
formats တွေကတော့AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264/AVC, AVCHD, MKV,
RM, MOV , XviD and 3GPတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်..မိမိရဲ့အမှတ်တရပုံတွေကို Video
SlideShow အဖြစ်ဖန်တီးပြီး သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများနှင့်ချစ်သူတို့အတွက် အမှတ်တရ
လက်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် လွယ်ကူစွာဖန်တီးချင်သူတို့အတွက် အသုံးတည့်မှာပါ။ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရအောင် patch နဲ့ ဖူးလုပ်အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပြီး အသုံးမပြုတတ်သေးတဲ့ သူများအတွက်Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို patch ဖိုင်လေး copy-paste နဲ့ ထည့် ၊ အဲ့ဒီပေါ်မှာ မောက်စ်မျှားတင် Right Click >> Run as Administrator >> patch ကိုတချက်နှိပ်ပြီး PATCHING DONE ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ..။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့5MB ပဲရှိပါတယ်အသုံးပြုလို
IN Recovery Software - ON Saturday, May 18, 2013 No comments
ဒါကတော့ ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ SD card၊ camera ထဲမှာပါတဲ့ SD card စတာ တွေကို format ချမိရင် ဒါမှမဟုတ် delete လုပ်မိရင် ပြန်ပြီးတော့ recovery ပြန်လုပ်တဲ့ software ပါ။ အထဲမှာ keygen ထည့်ပေးထားပါတယ်။ keygen ကို kaspersky ဒါမှမဟုတ် Microsoft security essential စတဲ့ antivirus program တွေက သတ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် keygen ဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင် အဆိုပါ antivirus program တွေကို ခဏ ပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ် ဆိုတာကို ကြိုပြီး အသိပေးပါရစေ။ ကဲ လိုချင်တဲ့ သူများအောက်မှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Driver Genius Professional 12.0.0.1306 Full Version
IN Driver Software - ON Friday, May 17, 2013 No comments
OS တစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းလို့ OS အသစ်ပြန်တင်ရတော့မယ် ဆိုရင် အဓိက ပြဿနာတက်တာ Driver ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့် ကွန်ပျူတာလေး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အလုပ်လုပ်နေတုန်း Driver တွေကို Backup လုပ်ထားရင် တစ်ခုခုတော့ စိတ်ချမ်းသာရတယ် မဟုတ်လားဗျာ။ ဒီခေတ်မှာ Driver ပေါင်းစုံကို တစ်ခွေတည်းနဲ့ရနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် Driver လေးကို သိမ်းထားလိုက်တော့ တစ်ခုခုအကျိုးရှိမှာပေါ့။ အခု ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ Driver Genius Professional ကို သုံးဖူးကြမှာပါ။ ဘယ်လိုကောင်းတယ်။ ဘယ်လို Driver မျိုးတွေကို Backup လုပ်ပေး နိုင်တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့သုံးကြည့်လိုက်ပါဗျာ..Driver Genius Professional 12.0.0.1306 ဖြစ်ပါတယ်။မိမိစက်မှာ
အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်..ပြီးရင် ဒီ Software အသုံးပြုပြီး မိမိကွန်ပျူတာအတွက် လိုအပ်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Driver တွေကို Update ရယူနိုင်ပါမယ်..Driver တွေ Update ဖြစ်ရင်
မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာလေးဟာလည်း အရင်ကထက်လုပ်ဆောင်မှုကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်ခင်မျာ
Some Features Of Driver Genius
Revision history : Driver Genius 12 (Version:12.0.0.1306) -- 16th May, 2013
Release Date: 16th May, 2013
IN Antivirus - ON Friday, May 17, 2013 No comments
Mailware တွေကို ဖိုက်တဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီး၊ လူကြိုက်များတဲ့ IObit Malware Fighter Pro ဖြစ်ပါတယ်.. version 2.0.0.202 ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ.. အရင်ကလည်း တင်ပေးခဲ့ဖူးပြီးသားဆိုတော့ အသေးစိပ်မရှင်းတော့ပါဘူး..
The application IObit Malware Fighter was developed to beatool advanced malware removal you can detect, remove and block unwanted applications.
· Home Guard
· Process Guard
· Network Guard
· File Guard
· Cookie Guard
· Browser Guard
· Guard disk USB
· Malicious Action Guard
IN Antivirus - ON Thursday, May 16, 2013 No comments
McAfee သုံးသူများအတွက် McAfee Stinger v11.0.0.266 ဖြစ်ပါတယ်.. Free Version ဖြစ်ပေမယ့် Virus တွေ၊ Malware တွေ၊ Virus စာရင်းမှာ မပါပေမယ့် စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးတဲ့ မသင်္ကာဖွယ် Threat တွေကို ရှင်းလင်းဖယ်ထုတ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်..
Download Links for 32bit ( x86)>>> zippyshare(or) solidfiles (or) Dropbox
Download Links for 64bit ( x64 )>>>sharebeast (or) uppit (or) Dropbox
IN Recovery Software - ON Thursday, May 16, 2013 No comments
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ကတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် delete နှိပ်မှား၍ဖြစ်စေ ဖျက်လိုက်ပြီးသော
File များကိုပြန်လည်ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်..တစ်ခြားလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့Features တွေကို အောက်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
• Unique modern algorithms allow you to recover as many files as possible;
• The contents of the files can be viewed before restoration;
• You can filter found files by name, date, size or status of recovery;
• Supported by the database Basket;
• Temporary files, folders and temporary Internet files can be excluded from the search results;
• Supports national symbols in the names of files and folders;
• Supports compressed files, and named NTFS data streams;
• Files can be restored even after you reinstall the operating system;
• Optimized for speed search engine;
• Supports NTFS, FAT16 and FAT32;
• Supports IDE hard drives, ATA and SCSI;
• It is possible to recover files even in case of the removal of them in DOS;
• Supports hard disksalarge volume;
• Supported operating systems Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 and 7/8 x86/64.
IN Typing software - ON Thursday, May 16, 2013 No comments
Typing Tutor ဗားရှင်းအသစ်ကလေးမို့ ပြန်လည်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ ။ တင်တော့တင်ပေးဘူးပါတယ် ကြာတော့ကြာပါပြီခင်ဗျာ။ ခုဗားရှင်းလေးကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ စာရိုက်ကျင့်မဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ။ အသွင်အပြင်လေးကလဲ မော်ဒန် ဒီဇိုင်းလေးပါ။ မိမိ အိမ်မှာ ညီငယ်ညီမငယ်တွေ အတွက်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးမို့ ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ မူရင်းလင့်ကလေ့လာလို့ရအောင်လည်းတင်ပေးထားပါတယ်။
IN Software - ON Thursday, May 16, 2013 No comments
Folder တွေကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ ဖိုင်ဆိုက်ကလေးကလည်းသေးပါတယ်။ အသုံးပြုရတာကလဲ အရမ်းကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (32-Bit / 64-Bit) တို့မှာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအားလုံး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ အသုံးပြုလို့ရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။
IN USB - ON Thursday, May 16, 2013 No comments
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ခုဖော်ပြပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ Microsoft Os လိုမျိုး window တွေကို usb stick လေးပေါ်ကနေ ၀င်ဒိုးတင်လို့ရအောင်ပြုလုပ်ပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ သူကတော့ Linux အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Linux ရဲ့ IMG ဖိုင်တွေကို ခုဆော့ဝဲလ်လေးသုံးပြီး stick ပေါ်မှာ တင်ထားမယ်ဆိုရင် အဲဒီ stick လေးကပဲ Linux Os ကို မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Install ပြုလုပ်လို့ရမှာပါ။
အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တဲ့ Os တွေကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
Update to support final release of Ubuntu 13.04, Kubuntu 13.04, Lubuntu 13.04, Xubuntu 13.04, and Edubuntu 13.04.
IN Cleaner, Speed Up Browser - ON Thursday, May 16, 2013 No comments
ဒီကောင်လေးက PC Optimizer Pro 6.4.6.4 Final နောက်ဆုံးထွက် ဗါးရှင်းလေး.. ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာနဲ့ Browser တွေကို နေ့စဉ်အသုံးပြုပြီးတိုင်း ဒီကောင်လေးနဲ့ အမှိုက်တွေရှင်းပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးလိုက်ရင် ကွန်ပျူတာနဲ့ Browser တွေကို မြန်လာစေမယ့် ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးပါ..။ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရအောင် patch နဲ့ ဖူးလုပ်အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပြီး အသုံးမပြုတတ်သေးတဲ့ သူများအတွက်Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို patch ဖိုင်လေး copy-paste နဲ့ ထည့် ၊ အဲ့ဒီပေါ်မှာ မောက်စ်မျှားတင် Right Click >> Run as Administrator >> patch ကိုတချက်နှိပ်ပြီး PATCHING DONE ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ..။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့5MB ပဲရှိပါတယ်အသုံးပြုလို
IN Speed up window, Windows ဆိုင်ရာ - ON Thursday, May 16, 2013 No comments
၀င်းဒိုးစနစ်ထဲမှာသိပ်ကို အရေးပါတဲ့ Registry ပိုင်းကိုerror တွေ စစ်ဆေးပေးတာ Fix ပြန်လုပ်ပေးတာတွေကိုထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် ဆော့ဝဲလေးပါဝင်းဒိုးစနစ်ကြီးရဲ့
Registry ပိုင်းမှာ Error တွေ များလာမယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာဟာလည်း တစ်နေ့တစ်ခြား အသုံးပြုရတာနှေးကွေးလေးလံလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိ
တဲ့ Registry ပိုင်းကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပြုပြင်ပေးမယ့် ဆော့ဝဲတစ်မျိုးလောက်တော့ Install လုပ်ထားသင့်ပါတယ်ကဲ .. လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါခင်ဗျာ...
Download>>>zippyshare (or) solidfiles (or) sharebeast
ဒေါင်းလို့ပြီးရင် Setup ဖိုင်ကို Install လုပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် Patch ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲကဖိုင်ကို C >> Program files >> GenuineRegistrydoctor ဆိုတဲ့
ဖိုဒါထဲကို ကူးထည့်လိုက်ပါတက်လာတဲ့ Box ကို Replace ပါတာရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် Full Version
အဖြစ် အသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီကဲ .. အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ
Genuine Registry Doctor 2.6.2.6 With Crack
Genuine Registry Doctor - multifunction program to clean, optimize and fix the registry errors of the operating system Windows.
The program allows you to remove obsolete entries from the registry and temporary files, Windows, clear the history of the web browser (for Internet Explorer), you can search for duplicate files and function of scanning the hard drive for errors.
Always troubled by the slow speeds, sudden crashes andabunch of errors? Why not fix all the system errors and explore the vast potential of your PC and enjoyamore secure network environment? With Genuine Registry Doctor, you just needacouple of clicks to accomplish that! It diagnoses all your system's errors and gives you the most professional treatment.
A number of built-in utilities, such as Startup Manager, Disk Cleaner, File Pulverizer, etc., Strongly enhance the performance of Genuine Registry Doctor.
You just need one small free app to own all the useful functions.
The very smooth download and installation, the clean and well-organized interface, the easy-to-understand navigation make Genuine Registry Doctor
extremely easy to handle even for the novices.
Eset NOD32 Anti Virus 6.0.308.0 Full Version Plus Free Serial Key
IN Antivirus - ON Wednesday, May 15, 2013 No comments
Eset NOD32 Anti Virus ကိုမှကြိုက်သူများအတွက် Version အသစ်နဲ့အတူ Serial Key တွေကိုပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...အဆင်ပြေကြပါစေခင်မျာ
Download>>>fileswap (or) solidfiles (or) sharebeast.
File Name: ESET NOD32 AntiVirus 6.0.308.0
File Size: 63.70MB (66,797,056 bytes)
IN Software - ON Wednesday, May 15, 2013 No comments
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ကတော့ Computer Mouse Cursor ရဲ့ပုံစံကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြောင်းလဲသုံးစွဲချင်တဲ့
သူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...Full Versionဖြစ်အောင် Patch File ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်
Download>>>solidfiles (or) sharebeast (or) Dropbox
နေ့စဉ် ကွန်ပြူတာပိတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ Super Antivirus-Spyware လေးကို Run ထားပြီး တခြား ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာလုပ်နေလို့ရပါတယ်၊တခါ Run ရင်ခန့်မှန်းချေ မိနစ် 20 ကနေ 30 လောက်ကြာ
တတ်ပါတယ် ၊တကယ်ကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကလေးပါ၊ SUPERAntiSpyware latest version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် full version အတွက် keygen ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ...
Download>>>solidfiles (or) sharebeast (or) zippyshare
SUPERAntiSpyware Specialized characteristics each of our extremely innovative Real-Time Protection to be sure protection by installing or even re-installation involving possible risks while you browse the net. Utilized along with each of our Initial Chance Deterrence and also Registry Protection, your personal machine can be safeguarded by 1000s of risks of which seek to assail and also imbed your digestive system on medical or even although concluding straight down your digestive system.
i) Detect and remove spyware, Adware, Malware, Trojans, Autorun.info's, Hacktools and many others Virus Tools
ii) Light on system resources and won't slow down Your computer like other antivirus or antimalware software do.
iii) Real Time blocking of threats
iv) First chance prevention of your system each time you starts up your system and shut down
v) Schedule either Quick, Full and custom scans
Internet Download Manager 6.15 Build 12.1 Full Version
IN Internet Download Manager - ON Wednesday, May 15, 2013 No comments
Internet Download Manager 6.15 Build 12.1 Full Version ထွက်လာပြန်ပါပြီ.. ဒီကောင်က Update ထွက်တိုင်း ဒေါင်းပြီး Update လုပ်ထားသင့်ပါတယ်.. ဒါမှ ဒေါင်းရတာ မြန်ဆန်ပြီး File Error တက်တာတွေ၊ Crash ဖြစ်တာတွေ နည်းမှာပါ...
IN Internet Tools - ON Tuesday, May 14, 2013 No comments
Skype အသုံးပြုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Final ဗားရှင်းထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Download>>>sharebeast (or) dropbox (or) zippyshare
Skype အသုံးပြုနည်း စာအုပ် Download>>solidfiles (or) zippyshare
TSR Watermark Image v2.4.0.4 Multilanguage with Key
IN Photoshop - ON Tuesday, May 14, 2013 No comments
ပုံတွေမှာမိမိစိတ်ကြိုက် နှစ်သက်ရာစာသားတွေကို ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းနှင့် ပုံရဲ့အရွယ်အစားကို
မိမိနှစ်သက်သလို ပြောင်းလဲရယူနိုင်ပြီး အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်တော်တော်များများကို
လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်..Full Versionတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Multilanguage support, Greek, Lithuanian, Turkish, Slovak, Swedish, Armenian, English, German, Italian, Vietnamese, Japanese, Hungarian, Czech, Romanian, Serbian, Spanish, Finnish, French, Hebrew, Dutch, Portuguese (Brazilian & Portugal), Chinese (Simplified & Traditional), Indonesian, Russian, Polish and Danish is supported.
Add multiple watermarks to each photo.
All Antivirus Keys For All Product 100% Working Updated 13 May 2013
IN Antivirus - ON Tuesday, May 14, 2013 No comments
Antivirus ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေရဲ့ Keysအသစ်တွေတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Avast : Key til 2014 and More..
Avg All Product key
Avira key Till 2015
NOD32 All Product key
Kaspersky All Product key
Malwarebytes Anti-Malware keys
IN Players - ON Tuesday, May 14, 2013 No comments
CyberLink PowerDVD Player ကိုနှစ်သက်စွာအသုံးပြုနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေတို့အတွက်
နောက်ဆုံးထွက် Full Version တွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Download>>>CyberLink PowerDVD 2013 Ultra v13.0.2720.57 Final
မြန်မာပြည်နဲ့အနေဝေးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် 7OnlineRadio
IN Radio - ON Tuesday, May 14, 2013 No comments
မြန်မာပြည်နဲ့အလှမ်းဝေးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ အလွမ်းပြေ 7Online Raido Player လေးပါ
အရမ်းကောင်းတယ် မြန်မာသီချင်း အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေပါ နားထောင်နိုင်ပါတယ် လက်ရှိထက်ထက်လည်း
သုံးနေတာနော်ဒီ Player လေးရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့" ကမ္ဘာမြေရဲ့ ဘယ်နေရာကိုပဲ ရောက်နေ ရောက်နေ သင်ဟာ မြန်မာ တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 7OnlineRadio ဟာသင့်အတွက်ပါ " စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါနော်
IN Driver Software - ON Monday, May 13, 2013 No comments
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Driver လိုအပ်နေသူများအတွက် အွန်လိုင်းရှိယုံနဲ့ လိုအပ်နေတဲ Driver တွေကို ရှာဖွေဒေါင်းလော့ယူပေးနိုင်တဲ့ DriverEasy Professional v4.5.0.25972 Multilingual ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... မိမိစက်မှာတင်ထားတဲ့ Driver တွေ dateout နေတာတွေကိုလည်း ရှာဖွေဒေါင်းယူပေးနိုင်ပါတယ်.... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့ Keygen ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast, Dropbox, Zippyshare သုံးနေရာတင်ပေးထားပါတယ်....